Thursday April 02, 2020 - 20:22:15 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Khilaaf daran oo dhanka siyaasadda ah ayaa lagasoo sheegayaa dhulka Soomaaligalbeed ee kujira gummeysiga Xabashida Itoobiya.
Wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in shaqada laga eryay mas'uuliyiin sarsare oo katirsanaa waxa loogu yeero dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Mustafa Cagjar oo ah madaxweynaha maamulkaas ayaa shaqad ka eryay madaxii amniga ninka lagu magacaabo Cabdi Caadil Xasan waxaana loo magacaabay Cabdullaahi dheere oo horay u ahaa taliye ku xigeenka amniga.
Wararka ayaa intaas ku daraya in isna la eryay Ilyaas Cali Bulxan oo ahaa madaxii sirdoonka waxaana si KMG ah loogu dhiibay nin lagu magacaabo Cabdi Siigaale oo horay ulasoo shaqeeyay Cabdi Ileey.
Khilaaf bilihii lasoo dhaafay udhaxeeyay hoggaanka maamulka Jigjiga kajiray ayaa xoogeystay waxaana la eryay saraakiil sarsare oo xabashida Itoobiya uqaabilsanaa dhulka Soomaaligalbeed, Mustafa Cagjar ayaa xabsiga utaxaabay C/qaadir Sheekh Bisle oo ahaa madaxii hab maamuuska madaxtooyada Jigjiga.
Shaqa eryiddan ayaa imaanaysa xilli ay soo dhowdahay doorashada guud ee Itoobiya waxaana muuqata in Mustafa Cagjar uu qaaday tallaab uu Xabsiga Abiy Axmed ugu fududaynayo in uu codad badan ka helo dhulka Somaligalbeed ee gummeysiga Itoobiya kujira.
Hindiya oo lafilayo in ay dhimashada Carona Virus uga sare marto Mareykanka.
Maxkamadda sare Ee Hindiya oo dambiyadii ka ridday Mas'uuliyiin loo heystay kiiska weerar lagu burburiyay Masaajid Taariikhi ah.